Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote Jocelyne : Sady procureur no préfet no kaomisera any Antsiranana
Depiote Jocelyne : Sady procureur no préfet no kaomisera any Antsiranana
Voatery tsy maintsy nanao “vote sanction”izahay aty Antsiranana tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna teo iny noho ny ataon’ny depiote Jocelyne hoy ny fahitan’ny mponina avy any an-toerana azy. Raha ny tokony ho izy dia ben’ny tanàna IRD ( isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina) no tokony ho lany saingy tsy mety ny ataon’ity sekretera jeneraly ny Mapar Jocelyne ity ka tsy nekenay intsony. Fanamparampahefana amin’ny lafiny rehetra no ataon’iny depiote iny ka tsy azo ekena intsony hoy ihany ny fanambarana.
Toa izao no zavatra nisy tany an-toerana hoy izy raha nanome ny fomba fahitany ny zava-doza ataon’ity ramatoa ity. Baikoany ny fampanoavana ao amin’ny fitsarana, toa izany koa ny kaomisera, ny préfet ary ireo talen’ny sampan-draharaham-paritra rehetra. Tena toa ity Jocelyne “Sg” ny Mapar ity no mifehy tanteraka ny tanànan’i Antsiranana hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Mahakasika ny fifidianana ben’ny tanàna teo dia olona hafa no novolavolain’ny Tgv/ Mapar sy ny IRD. Rehefa tonga nefa ny fanolorana kandidà dia izany Wawa izany no notereny hofidian’ny olona ka nasolony ny kandidà izay neken’ny rehetra. Ity tovolahy ity izay mipetraka any Frantsa ary “legionnaire” tao amin’ny miaramila frantsay no nataony tany.
Tezitra noho izany ny olona ka dia nikomy fa tsy hifidy ny kandidà Wawa ity izay tsy fata-bahoaka velively ary napetraka amin’ny fomba jadona sy fanamparam-pahefana tanteraka.
Nanambara koa ny loharanom-baovao fa fampitandremana homena hoan’ingahy Andry Nirina Rajoelina iny satria manaonao foana ny olona notokisany. Nambara hatrany ny loharanom-baovao fa hopotehan’i depiote Jocelyne ity ny fitiavan’olona ny filoham-pirenena any Antsiranana.